Fiainana mpanakanto :: Henri Ratsimbazafy : “Indroa natao mariazy tamin’ny vehivavy iray aho” • AoRaha
Mpanakanto fanta-daza tamin’ny sehatry ny hira malagasy I Henri Ratsimbazafy. Anisan’ny mampiavaka azy ny fivoizana ny fitiavana amin’ny endriny maro. Manana tantaram-pitiavana hafakely sady mahavariana izy. Ampahafantariny ato ny fisaraham-panambadiana niainany. Valiany ato ihany koa ny antony nilazany hoe hanao seho farany.Iresahany ny zavakanto ataony sy ny andavanandrom-piainany
Andrarezin’ny hira malagasy tsy mety lefin’ny vanim-potoana nifandimby i Henri Ratsimbazafy. Mbola mijoro sy mahiratra tsara ny lehilahy. Tsy mbola maika ny haka ny fisotroan-dronono amin’ny fanaovana mozika ity mpanakanto ity. Vao avy nanamarika ny fahaenimpolo taona nihirany tetsy amin’ny Plaza Ampefiloha izy tamin’ny volana aogositra lasa teo.
Mandia ny fahaenina amby valopolo taonany i Henri Ratsimbazafy amin’izao fotoana izao. Niteraka enina mianadahy izy (dimy vavy sy lahy iray). Telo ambin’ny folo ny isan’ny zafikeliny. Dimy ny zafiafiny. Ho azy,dia tsy misy loatra ny tsiambaratelon’ny fahatezana.
“Ny fitiavana no fototry ny zava-drehetra. Izay no mahatonga ahy mihira ny fiainana sy ny fitiavana sy izay rehetra mahafinaritra manodidina azy. Rehefa laroina fitiavana amin’ny fomba rehetra izay ataonao dia misy hery sy haravoana tsy hainao faritana mipololotra ao anatinao”, hoy izy.
Nahavitabe teo amin’ny tontolon’ny zavakanto malagasy i Henri Ratsimbazafy. Raha tsiahivina, efa indroa nahazo ny loka lehibe « Grand prix de la chanson française à Madagasikara » nokarakarain’ny ivon-toeran’ny kolontsaina Albert Camus sy ny minisiteran’ny Fampahalalam-bavovao ity mpanakanto ity tamin’ny taona 1962 sy 1963. Ilay hira « Simba tyrolienne » sy ny « Ny lambanao mikopakopaka » no noentiny nifaninana tamin’izany.
Toy ny lalana nizoran’i Henry Ratsimbazafy teo amin’ny tontolon’ny zavakanto dia nahavita hazakazaka lavitra ezaka ihany koa ny lehilahy teo amin’ny sehatry ny fanambadiana. Maro ny traikefam-pitiavana hitany sy niainany. Vao iraika amby roapolo taona monja izy dia efa nanorina tokantrano. Nambaran’ity mpanakanto ity tsy tamim-pihambahambana fa efa indroa nisara-bady izy.
“Tsy nampoizina ilay fisarahana. Niara-nihafy sy nihary izahay, saingy tsy nifanaraka. Niezaka nandresy lahatra azy aho, saingy tsy nifanaraka hatramin’ny farany izahay. Dia nandeha nianatra tany andafy ilay vadiko fa izaho kosa nitaiza ny zanakay efatra mianadahy teto an-tanindrazana. Olona be hambo izay aho ka tsy nanisy olona ny amin’izay satria vitako tsara ny mamelona ny zanako. Izay ny fisarahana voalohany”, hoy izy nampahatsiahy ny traikefam-pitiavany.
Tokantrano tsy naharitra
Rehefa nikisaka teny ny volana sy ny taona no nahatsapa ity mpanakanto ity fa mitovy daholo ny vehivavy rehetra. Nanapa-kevitra ny hiverina tamin’ilay andefimandriny voalohany, izay nisarahany indray izy, nony taty aoriana. Nisy ny lanonam-panambadiana fanindroany teo amin’izy ireo, avy eo, sady niteraka ny zanany fahadimy. “Na izany aza, tsy naharitra hatramin’ny farany ny fiarahanay satria roa taona monja no nivadianay dia rava ilay tokantrano vao. Izay ny fisarahana faharoa”, hoy izy nanohy ny tantaram-pitiavany.
Nivoady ny tsy hanambady intsony i Henri Ratsimbazafy nanomboka teo. Kanjo, tsy izay ny zava-nitranga fa resim-pitiavana indray ny anao lahy rehefa niseranan’ireo karazam-behivavy maro nambabo ny fony, araka ny notantarainy ao anatin’ilay hira hoe “Mahafatifaty”. “Nampiakariko ho vady io vehivavy nambabo ahy io. Niteraka iray izahay ary tsy hisaraka aminy intsony aho”, hoy izy.
Imbetsaka i Henri Ratsimbazafy no nilaza fa hanatanteraka fampisehoana farany, sady hitsahatra amin’ny fanaovana mozika. Ny hakiviana mahery vaika nilentika tao an-tsainy no nahatonga azy niteny ireny, araka ny nambarany. “Mihaino onjam-peo na mijery fahitalavitra aho isaky ny maraina. Hira mafana sy mampandihy daholo no henoko sy hitako mitandahatra amin’ireny. Kivy tanteraka aho satria tsy misy mandefa intsony ny mozika ataoko. Nihevitra aho fa manomboka lefy ny fankafizan’ny olona ny kanto voiziko ka nanapahako hevitra ny hijanona. Diso fihevitra anefa ny tenako satria maro ireo mpikarakara lanonana sy mpanakanto niantso ahy hiaka-tsehatra. Noho izany, tsy maty fa velona ary mbola misy mitady ny zavakanto ataoko. Tsy vitsy koa ireo miantso hampianatra hira sy zavamaneno”, araka nambaran’i Henri Ratsimbazafy.
Tsy lany famoronana
Mitohy hatrany ny fanaovana mozika sy ny famoronan-kira ho an’i Henri Ratsimbazafy. “Ho ahy manokana, tsy misy fetra ny famoronana amin’ny maha mpankanto. Ny fikarohana ny lohahevitra horesahina no sarotra amiko. Na izany aza, tsy mitsahatra manoratra hira vaovao aho. Betsaka ireo hira noforoniko vao haingana, saingy tsy mbola voavoatra tsara. Ao anatin’ny fikarakarana ny tenako amin’izao fotoana izao”, hoy izy.
Mampisongadina an’i Henri Ratsimbazafy ny fananana hira amin’ny Teny malagasy sy amin’ny Teny frantsay kanefa samy ahafantarana ilay aingam-panahy sy famoronana mitaratra ny kolontsaina malagasy. Anisan’ireny ny “Lamba blanc”, “Chante ma valiha”, “Au Zoma”, “Talaky mandeha”… Mahatratra dimampolo sy roanjato eo ho eo ny sanganasa noforoniny, ankehitriny.
Manana asa aman-draharaha sahanina eo amin’ny fiainany andavanandro i Henri Ratsimbazafy. Miovaova ny fandaharam-potoanany amin’izany. « Farafahakeliny olona roa na telo no mifamotoana amiko isan’andro, rehefa tsy misy fampisehoana omanina. Mandeha tsy mijanona aho satria iaraha-mahalala ny fifamoivoizana eto amintsika. Misy fotoana koa aho mampianatra hira sy zavamaneno », hoy izy mampahafantatra ny zavatra ataony isan’andro. Tsara ho fantatra fa mbola mahavita mitondra fiara soa aman-tsara ity mpanakanto efa voky taona ity. Lehilahy tsy mba tia mipetrapetraka i Henri Ratsimbazafy. Fahazarana sady fialamboliny ny mikarakara sakafo rehefa sendra mijanona ao an-trano izy.
Hira fiderana Hamoaka vokatra iray i Rojo Ny Avo sy Mialy Rakotomamonjy
Loabary an-dasy :: Hifanankalozana hevitra eny Ankatso ny tontolon’ny fandikan-teny
Hiragasy makotrokotroka :: Adin’ny samy mangotraka ny an-dry Ramilison Besigara sy Rafarahasimanga